Old Küsteri Hohen Mistorf (kufuphi Teterow, Malchin) - I-Airbnb
Old Küsteri Hohen Mistorf (kufuphi Teterow, Malchin)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAntje
EMecklenburg Switzerland / ISithili saseLake, phakathi kwamachibi amathathu, sinikezela ngefulethi leeholide ukuya kuthi ga kwi-4 abantu (ubuninzi be-3 abadala) kwisakhiwo esidwelisiweyo. Thatha ithuba lommandla omhle wokuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuhamba.
Le ndlu inencasa kwaye iyasebenza ukuze uzive usekhaya xa useholideyini. Abantwana bamkelekile kakhulu, ibhedi, iithoyi kunye nomgodi omkhulu wesanti zikhona.
Indawo yethu yi-42.3 m² ngobukhulu, iyasebenza kwaye inefenitshala ekhululekileyo kwaye inika indawo eyaneleyo ukuya kuthi ga kubantu abane.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elidibeneyo / igumbi lokulala elinebhedi epholileyo ephindwe kabini (1.60 m), ibhedi egobileyo (1.40 m), ibhedi yomntwana, ikhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba kunye nefestile.
Kwindawo yokungena uya kufumana i-wardrobe, indawo yokubeka izihlangu kunye namathuba okuxhoma i-wardrobe yakho.
Ukongeza kukhetho oluthengiswe kakhulu kuncwadi, sikwanayo ingqokelela yemidlalo kunye nezinto zokudlala kunye nezinto zokupeyinta zabantwana bakho. Kwabancinci kukho kwakhona isihlalo sendlu yangasese okanye imbiza kunye nesinyathelo se-sink.
Umdlali weDVD udityaniswe kwiTV, kwaye kukho nenkqubo encinci yestereo enonxibelelwano lwe-USB. Sinazo iiDVD neeCD ezimbalwa zabantu abadala nabantwana, kodwa ndicela uze nento.
Ukukhuseleka kwakho, igumbi lixhotyiswe ngeealam zomsi, izicima-mlilo kunye namabhandeji.
Ekubeni indlu ifakwe ngokupheleleyo ngeethayile, sincoma ukuba iindwendwe zethu zizise i-slippers kuyo nayiphi na imeko.
Kuzolile ngokumangalisayo kwaye kunoxolo apha. Nangona kunjalo, umntu akanakulindela ukuba iteletele ayisoze iqhube kule lali okanye akukho mntu uya kucheba okanye abone ingca, ngakumbi ngeMigqibelo. Phofu ke, silapha ecaleni kwecawa, enokukuvusa kusasa ukuba uvuka kade.
Ich bin Kongress- & Projektmanagerin bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie e. V. und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, dennoch bra…
Asisoloko sikwisayithi, kodwa sinokufikelelwa nanini na ngefowuni nangencoko ka-Airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alt Sührkow